Kadib Ciyaar Xiiso Lahayd Real Madrid Oo Ku Guulaysatay Koobkeedii 12-aad Ee Champions League Iyo Buffon Oo Bilaa Champions League Kaga Fariisan Doona Kubada Cagta – Kooxda.com
Home 2017 June Champions League, Italy, Spain, Wararka Maanta Kadib Ciyaar Xiiso Lahayd Real Madrid Oo Ku Guulaysatay Koobkeedii 12-aad Ee Champions League Iyo Buffon Oo Bilaa Champions League Kaga Fariisan Doona Kubada Cagta
Kadib Ciyaar Xiiso Lahayd Real Madrid Oo Ku Guulaysatay Koobkeedii 12-aad Ee Champions League Iyo Buffon Oo Bilaa Champions League Kaga Fariisan Doona Kubada Cagta
June 3, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kulan xiiso badan ayaa Principality Stadium ku dhex maray kooxda Juventus iyo Real Madrid kana tirsanaa finalka champions League xilli ciyaareedkan 2016/17.
Kulanka ayaa ahaa mid caalamka oo dhan si weyn looga daawanayo iyada oo isha lagu hayo xiddigaha ka ciyaaraya kulanka kuwa soo bandhigi doona qaab ciyaareed cajiib ah.
Juventus ayaa kulankan u soo gashay sidii ay ugu guulaysan lahayd koobkeedii 3-aad ee champions League iyo in ay koobkan ku macasalaamayso goolhayeheeda Buffon.
Real Madrid ayaa kulankan iyaduna u soo gashay in ay kor u qaado koobkeedii 12-aad ee champions League siina difaacato koobkii ay xilli ciyaareedkii hore qaaday.
Kulanka ayaa ku bilowday mid xiiso badan leh oo ay labada kooxoodba kulanka la soo galeen dar-dar waali ah kuwaas oo ku doonaya in ay midba midka kale uga hor marto oolka furitaanka.
Juventus ayaan wakhti badan sugin in ay sigto goolka Real Madrid Kadib markii uu Higuain daqiiqadii 3-aad laag xoogan ku laagay goolka Real Madrid laakiin Goolhaye Navas ayaa ka hor istaagay midaas.
Isla Higuain ayaa mar kale soo laabtay mar kalena sigay in uu kooxdiisa wakhti hore hogaanka ciyaarta u dhiibo laakiin hadana Navas ayaa geesi ku noqday una diiday in uu shabaqiisa soo taabto.
Juventus ayaa halkeedii ka sii waday weerarkii wakhtiga hore ahaa ee ay ku haysay kooxda Real Madrid kadib markii daqiiqadii 7-aad uu laag xoogan ku laagay xiddiga khadka dhexe ee Pjanic laakiin markale ayuu Navas badbaadiyay kooxdiisa.
Real Madrid ayaa markeedii bilowday in ay daafaca ka soo kacdo weerarana ku qaado kooxda Juventus si ay isaga caabiso weerarka adag ee ay Juventus ku hayso.
Daqiiqadii 20-aad Ayay Real Madrid heshay goolkeedii 1-aad iyada oo uu u dhaliyay hogaamiyeheeda reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kaas oo kulanka ka dhigay 1/0 ay hogaanka ku hayso kooxda Real Madrid.
Juventus ayaa dib u bilowday weerarkeedii xiriirka ahaa laakiin waxa ay markan u foof tagtay sidii ay ku keeni lahayd goolka bar-baraha maadama gool looga hor maray.
Daqiiqadii 27-aad ayay Juventus soo taabatay shabaqa Real Madrid iyada oo uu gool qurux badan oo qalaama rogad ah u dhaliyay weeraryahanka reer Croatia ee Mario Mandzukic kulankana ka dhigay bar-baro 1/1 ah.
Kulanka ayaa wixii intaa ka dambeeyay isku badalay mid ay labada kooxood kala qaybsadeen maadama ay bar-baro yihiin waxana ay ciyaarayeen warar iyo weerar celis.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta kulan xiiso lahaa oo ay labada kooxoodba soo bandhigeen qaab ciyaareed aad loola dhacay taageerayaashana raali galiyay.
Qaybta Dambe ayaa ku bilaabatay Mid ay Real Madrid weerar ku bilaabatay iyada oo doonaysa in ay goolal kale ka dhaliso Juventus si ay u niyad jabiso Kooxda reer Italy.
Daqiiqadii 61-aad ayay Real Madrid heshay Goolkeedii 2-aad iyada oo uu u dhaliyay xiddiga khadka dhexe ee Casemiro isaga oo kulanka ka dhigay 2/1 ay Los Blancos ku hayso hogaanka kulanka.
Juventus ayaa isku dayday in ay madaxa kor u qaado oo ay isku daydo in ay mar kale ka soo laabato goolka looga hor maray laakiin umay suuro galin midaas.
Real Madrid ayaa halkeedii kasii waday goolashii iyada oo daqiiqadii 64-aad heshay goolkeedii 3-aad iyada oo uu u dhaliyay xiddiga 1-aad ee kooxda Real Madrid cristiano Ronaldo kulankana ka dhigay 3/1 ay Real Madrid ugu raaxaysanayo Hogaanka kulanka.
Kooxda Real Madrid ayaa daqiiqadii 90-aad heshay goolkeedii 4-aad iyada oo uu u dhaliyay da,yarka qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Marco Asensio isaga oo kulanka ka dhigay 4/1 ay Real Madrid ku hayso hogaanka
Kooxda Juventus ayaa wixii intaa ka dambeeyay niyad jabtay awoodna u yeelan wayday in ay weerar ku qaado kooxda Real Madrid waxana ay kaliya ku filnaadeen in ay goolkooda ilaashadaan si aan goolal kale looga dhalin.
Waxana sidaas ku dhamaatay ciyaar qaybtii hore xiiso lahayd qaybtii dambena koox kaliya maamulaystay oo ay kooxda Real Madrid ku hanatay koobkeedii 2-aad oo xiriir ah oo champions League ah iyo koobkoodii 12-aad oo champions League ah.